Izicelo ze-Android: uphononongo, ukukhutshwa okutsha, simahla nangaphezulu! | I-Androidsis
Ifowuni ye-Android ngekhe ibekhona ngaphandle kwezicelo zayo. Izicelo zezo zikuvumela ukuba uphakamise ukusebenza kwe-smartphone ye-Android uye kubomi obungapheliyo kwaye wenze esi siginali nantoni na oyifunayo: isixhobo somsebenzi, indawo yezemidlalo, i-ajenda yobuqu okanye nantoni na.
KuGoogle Play-ivenkile yosetyenziso lwe-Android-esinayo iiapps zazo zonke izinto ozithandayo kunye nayo yonke imisebenzi efanelekileyo. Ii-ajenda, imidlalo, i-automation yeofisi, iinethiwekhi zentlalo, usetyenziso lokuzonwabisa, kwezemidlalo, njl. Zininzi izinto onokukhetha kuzo ukuba eyona nto ibalulekileyo kukwazi ukugxila kwaye ufumane oko ukufunayo, kunye nokuthintela ukufaka usetyenziso olungeyomfuneko kwaphela…. Kwaye yile nto siyiyo! Ukukunceda ungene eli hlabathi lezicelo ze-Android.
Ukudityaniswa kweeapps ze-Android
Ezona zixhobo zibalaseleyo ze-2018
Khuphela ii-APK zamva nje zezonaapps zilungileyo
Ukukhangela usetyenziso lwezempilo? Fumanisa kweli candelo ezona zicelo zibalaseleyo zokuphucula impilo yakho okanye neengcebiso zokuba uhlala umile njani.
Ezona zixhobo zilungileyo zomzimba
Izicelo zokwenza i-abs
Usetyenziso lokuyeka ukutshaya
Iiresiphi kunye nokupheka iiapps
Ezonaapps zilungileyo zokuhamba intaba
Ezona nkqubo zilungileyo zokuzilolonga
Kweli candelo uya kuba nakho ukwazi yonke into malunga nezona ndawo zidumileyo zonxibelelwano lwasekhaya. Ungazikhuphela njani, ubuqili bokuzisebenzisa ngcono kwi-Android kunye nazo zonke iindaba ngazo.
Iiapps zokusebenzisa i-Twitter
Usetyenziso ukudibana nabantu
Eyonaapps ilungileyo yokwenza iifowuni zevidiyo
Iindaba zakutshanje ze-WhatsApp kunye namacebo
Kwizinto eziluncedo uya kufumana ezona zicelo zibalaseleyo ze-Android eziza kukunceda wenze ubomi bakho bube lula. Skena amaxwebhu, uthabathe amanqaku okanye uphucule imveliso yakho ngezona zicelo zibalaseleyo oza kuzifumana kweli candelo.
Ezona nkqubo zokusebenza zilungileyo
Ezona zixhobo ziSikhumbuzo
Izicelo zokuphucula imveliso
Eyona nto ifanelekileyo yokuthatha inqaku
Izicelo zokulawula iindleko
Eyona nto ifanelekileyo yokufumana iifayile ezisusiweyo
Izicelo zokukhusela imfihlo yakho
Ii -apps zokuvimba iifowuni
Izicelo zokurekhoda isikrini sakho esiphathwayo
Usetyenziso ukuskena amaxwebhu
Ezona nkqubo zilungileyo zokuvula iifayile
Usetyenziso lokufumanisa iiradar
Ukuba into onomdla kuyo zizicelo malunga neepodcast okanye ukwazi ukuba ngu-DJ usebenzisa i-smartphone yakho ye-Android, uya kuba nakho ukuzifumana zonke zingezantsi kwaye usebenzise ifowuni yakho ngeyona ndlela ifanelekileyo.
Ezonaapps zilungileyo kwiimvumi
Izicelo zokumamela unomathotholo
Izicelo zokuba yi-DJ kwi-Android
Usetyenziso lokumamela iipodcast kwi-Android
Okungakumbi malunga nosetyenziso lomculo kwi-Android
Ukuba into oyifunayo zizicelo zokuhlela iifoto zakho kwiselfowuni yakho ye-Android, nazi ezinye zezonaapps zilungileyo zokuphinda ubeke imifanekiso yakho:
Eyona nto ifanelekileyo yokufota kwi-Android
Usetyenziso ukulungiselela iifoto
Izicelo zokuthatha iifoto zepanoram
Iiapps zokwenza iimemes
Ezona zixhobo zoyilo zibalaseleyo
Okungakumbi malunga neefoto zokusebenza ze-Android
Ukuba ujonga usetyenziso onokufunda ngalo kwifowuni yakho ye-Android, siya kukushiya nokhetho lwezona zicelo zibalaseleyo zoqeqesho kuGoogle Play.
Eyonaapps ilungileyo yokufunda isiFrentshi
Iiapps zokufunda ukucula
Usetyenziso lokufunda isiJamani
Usetyenziso lokufunda ukudlala ipiyano
Okungakumbi malunga nezicelo zokuhlela iPDF
Inkqubo yendalo kaGoogle
Ukuba ufuna ukuhlala unolwazi ngayo yonke into enxulumene ne-ecosystem kaGoogle, kubandakanya nokusetyenziswa kwayo, ungaphoswa leli candelo. Zonke iindaba kunye namaqhinga malunga nokufumaneka kuyo.
Ezonaapps zilungileyo ze-Android Wear kunye ne-Wear OS
Eyonaapps ilungileyo kwiKhaya likaGoogle
Ezona zixhobo zilungileyo zewindows smartwatch yakho
Usetyenziso lwe-Android TV
10 kufuneka-ube Android apps
Kwi-Android sifumana ukhetho olukhulu lwezicelo ezikhoyo. Nangona kukho ezinye izicelo ezigqame ngaphezu kwezinye, esinokuzijonga njengezona zilungileyo. Ezi zezona zixhobo zilungileyo zilishumi ezikhoyo kwi-Android namhlanje.
Isicelo sokuhamba siye savela kakhulu. Asisayisebenzisi nje ukuya kwizikhombisi okanye ukuhamba xa siqhuba kwenye indawo. Sikwabona imeko yezithuthi, ukufumanisa iindawo ezinomdla okanye ukufikelela kwizibonelelo zasekhaya. Uhlelo lokusebenza olupheleleyo.
Inkqubo yokusasaza umculo yaseSweden yenye yezona zidumileyo kwi-Android. Isinika ukufikelela kukhathalogu enkulu yomculo kwifowuni, eya kusivumela ukuba simamele umculo wethu owuthandayo naphina apho sikhona.
Isicelo ngokuqinisekileyo sesona sithandwa kakhulu kwi-Android. Enkosi kuye sinokuthumela imiyalezo kubahlobo nakwintsapho zethu kwaye siqhakamshelane nabo ngalo lonke ixesha. Sineengxoxo zeqela, ukongeza kumnxeba wokufowuna okanye wevidiyo.
Le app ifoto yenye yezona zinto zibalulekileyo kwi-Android namhlanje. Ayaneli kusivumela ukuba sigcine zonke iifoto zethu ngokukhuselekileyo efini, kodwa ikwasivumela ukuba sizilungiselele ngokulula kuzo zonke iindidi zeendidi. Ikwavumelanisa nezinye izixhobo.
Inethiwekhi yokuncokola ngoku yenye yezona zicelo zidumileyo kwi-Android. Singafaka iifoto kunye neevidiyo kuyo, ukongeza kumabali abo (anyamalala kwiiyure ezingama-24). Ithuba lokulandela iiakhawunti zazo zonke iintlobo kwiapp, ukongeza ekubeni ukwazi ukuthenga ngaphakathi kuyo, yenze ibe yenye yezona zigqibeleleyo.
Enye inethiwekhi yentlalo eyaziwayo ukuba igcinwe kwimarike kwaye iyimfuneko ebalulekileyo kwi-Android. Enkosi ngayo sinokunxibelelana nabahlobo, ukongeza ekubeni sihlaziyekile kwiindaba zehlabathi okanye silandela amagcisa ethu awathandayo kuwo.
Isicelo sisisiseko kwifowuni nganye ye-Android. Singafikelela kwiakhawunti yethu ye-imeyile ngendlela elula. Ukongeza, sinemisebenzi enomdla kakhulu, njengokucwangcisa ii-imeyile. Ke, ukuba sihlale sifumaneka naphi na apho sikhona.
Indlela elungileyo yokuguqula inkangeleko yefowuni yakho ye-Android ngendlela elula, kunye nemisebenzi emitsha kunye nezinto onokukhetha kuzo, ezinje ngemowudi emnyama, evumela abasebenzisi ukuba babe nokusetyenziswa okungaphezulu kwenkqubo yokusebenza ngalo lonke ixesha.
Isikhangeli siyimfuneko kwi-Android, kodwa iGoogle Chrome inokwenzeka, efakwe ngokwendalo kwiifowuni, ezipheleleyo. Isinika imisebenzi emininzi, ukusetyenziswa kwayo kulula kwaye ikwasivumela ukuba siyivumelanise kunye nenguqulelo yedesktop ngeakhawunti kaGoogle.
Esinye isicelo sokuthumela imiyalezo, esizuze indawo kwi-Android. Imele ujongano lwayo olulula, kodwa ngokusinika imisebenzi emininzi eyahlukeneyo, ngakumbi kwicandelo labucala, ngeengxoxo ezifihlakeleyo okanye ukubanakho ukutshabalalisa ngokuzenzekelayo emva komzuzwana.
Usetyenziso olungakumbi nge- Android
Kweli candelo ungafikelela kwizicelo ezahlukeneyo esizihlalutya mihla le. Fumanisa ezona mpendulo zibalaseleyo kunye nazo zonke izifundo kunye namacebo okufumana uninzi lweeapps ze-Android.
Uyenza njani iphepha lodonga kwifowuni yakho ye-Android
por UEder Ferreno yenzayo Iintsuku ze6 .
Abasebenzisi be-Android bafuna iindlela zokwenza ifowuni yabo ibe yeyakho. Le yinto esinokuyenza ngeendlela ezahlukeneyo, kodwa…
Icalculator yesayensi ye-Android: yeyiphi engcono?
por UIsake yenzayo Iveki e-1 .
Iselula ibe liziko elipheleleyo lomsebenzi kunye nokuzonwabisa. Iifowuni ziphantse zaya ku...
Ii -apps ezilungileyo zokwenza imizobo yombane kwi-Android
por UAron Rivas yenzayo Iveki e-1 .
KwiVenkile yePlay zininzi ii -apps onokukhetha kuzo kwaye uzikhuphele. Kukho zonke iindidi, ukusuka...
Utshintsha njani ulwimi lwe-WhatsApp
por UAron Rivas yenzayo Iiveki ze2 .
Ukuba une-WhatsApp kwiselfowuni yakho kwaye, nangasiphi na isizathu, ufuna ukutshintsha ulwimi, ungakwenza oko nje...
Kutheni abantu befihla unxibelelwano lwabo lokugqibela kuWhatsApp? iinketho kunye neempendulo
Yenye yezona zinto zisetyenziswa kakhulu kwizicelo zokuthumela imiyalezo kwihlabathi liphela. I-WhatsApp ngaphandle komgaqo-nkqubo wayo wabucala igcinwe…
I-RECICLOS: lunjani usetyenziso olunika umdla onokuphumelela ngalo amabhaso ngokurisayikilishwa
por UDaniPlay yenzayo Iiveki ze3 .
Ukutyhubela iminyaka, abantu baye bakwazi ukurisayikilisha, ukwahlula inkunkuma nganye…
Ezi-9 ezizezinye ezizezinye kwi-Omegle
I-Omegle liqonga lencoko elingaziwayo elinempumelelo yalo isekwe kweso siseko, ukukwazi ukunxibelelana nabantu ngaphandle kokuba…
Izibonelelo zasimahla zexesha elilinganiselweyo kwiVenkile yokuDlala kuGoogle. UHLAZIYO LWEMIHLA NGEMIHLA !!
Uphengululo lwevidiyo kunye nokuzoba Amandla oMculo IBHOKISI 5+ YALL Edition
Uyibukela njani yonke imidlalo yeNdebe yeHlabathi ye-2018 eRussia simahla
I-Lock Lock, enye yezona zixhobo ezifanelekileyo zokulawula ubumfihlo be-Android yakho
Indlela entsha emangalisayo yokutshixa i-Android. Yibethe !!
Ungasifaka njani isicelo esisemthethweni seWhatsApp kwiThebhulethi yakho ye-Android
Ulujonga njani ukhuseleko lweWifi yakho kwaye wazi ukuba zeziphi izixhobo ezidityanisiweyo
Ezi zizicelo ezili-19 eziye zagrumba iBitcoin kwi-Android ngaphandle kwemvume yethu
Fumana eyona midlalo ihlawulelwayo yasimahla yexesha elimiselweyo kwiVenkile yokuDlala